သစ်ပင်များလမ်းလျှောက်သကဲ့သို့ လူတို့ကို မြင်ခဲ့သည်! | He Saw Men as Trees Walking! | Real Conversion
သစ်ပင်များလမ်းလျှောက်သကဲ့သို့ လူတို့ကို မြင်ခဲ့သည်!
ဩဂုတ်လ ( ၂၆ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“ဗက်ဇဲဒမြို့သို့ရောက်တော်မူလျှင်၊ လူကန်းတယောက်ကို အထံတော် သို့ဆောင်ခဲ၍၊ ထိုသူကို တို့တော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်ကြ၏။ ကိုယ်တော်သည် လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍ မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှ၊ သူ၏ မျက်စိကို တံထွေးနှင့်ထွေး၍ သူ့အပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်လျက်၊ သင်သည် တစုံတခုကိုမြင်သဘောဟု မေးတော်မူ၏။ ထိုသူသည် ကြည့်မျှော်လျှင်၊ လူတို့သည် သစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ လှမ်းသွားသည်ကို အကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်ဟု လျှောက်၏။ နောက်တဖန် သူ၏မျက်စိပေါ် မှာ လက်တော်ကိုတင်၍ မျှော်ကြည့်စေတော်မူလျှင်၊ သူသည် ပကတိအ ဖြစ်သို့ရောက်၍ အလုံးစုံတို့ကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်လေ၏။” ( မာကု ၁၁း ၂၂- ၂၅ )
ခရစ်တော်သည် ဗက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွလာသည်။ သို့ရာတွင် သူသည် ထိုအရပ်တွင် တရားဟောပြောခြင်းမပြုပါ။ တပည့်တော်တို့သည် ဗက်ဇဲဒမြို့ရှိ မျက်စိကန်းသောသူတဦးကို အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်တော်သည် ထိုသူကို ထိုမြို့၌ ကျန်းမာစေ ခြင်းမပြုပါ။ ဗက်ဇဒမြို့သည် ငါးနှစ်ကောင်နှင့်မုန့်ငါးလုံးကို လူငါးထောင်အား ယေရှုကျွေးမွေး ခဲ့သောနေရာသာဖြစ်ပါသည်။ ( မာကု ၆း ၃၈- ၄၄ ) ယေရှုသည် ပင်လယ်ပေါ်တွင် လမ်း လျှောက်ခဲ့သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုလည်း ထိုအရပ်၌ ပြသတော်မူခဲ့သည်။ သို့ ရာတွင် ဗက်ဇဲဒမြို့သားများသည် နောင်တရလျက် ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သည် ထိုမြို့ကို ကျိန်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က “တရာစီရင်သည့် နေ့” တွင် အပြင်းအထန် တရားစီရင်တော်မူမည်အကြောင်း မိန့်ဆိုခဲ့သည်။
ယခုတွင် ခရစ်တော်နှင့်တပည့်တော်တို့သည် ကျိန်ခြင်းခံရသော ထိုမြို့သို့ရောက်လာ ခဲ့ကြသည်။
“ဗက်ဇဲဒမြို့သို့ရောက်တော်မူလျှင်၊ လူကန်းတယောက်ကို အထံ တော်သို့ဆောင်ခဲ၍၊ ထိုသူကို တို့တော်မူမည်အကြောင်း တောင်း ပန်ကြ၏။” ( မာကု ၈း ၂၂ )
ဤအရာမှာ လူငယ်လေးတစ်ဦးသည် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်သောလော့စ်အိန်ဂျယ်တွင် မည်သို့ ပြောင်းလဲလာသည်ကို ထင်ရှားစေသည့် ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ပထမအချက်၊ ထိုမြို့သည် ကျိန်ခြင်းခံရသောလည်း ရွေးချယ်ခံမျက်ကန်း လူငယ်လေးမဟုတ်ပါ။
“ရွေးကောက်ခြင်းခံရသူများ” မှာ ကမ္ဘာမတည်မရှိမှီကတည်းက ကယ်တင်ရန် ဘုရား သခင်ရွေးကောက်ထားသောလူများဖြစ်ကြသည်။ “ရွေးကောက်ခံရသူများသည် ထိုအကြောင်း ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး ကျန်သူများမှာ ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းလျက်ရှိကြပါသည်။” ( ရောမ ၁၁း ၇ ) မြို့တစ်ခုလုံးသည် ပျက်စီးနေပြီး ဘုရားသခင်တောင် အရှုံးပေးရသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆို သော် သူတို့သည် ယေရှုခရစ်ကို ငြင်းပယ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် တမြို့လုံး သည် ကြိမ်ခြင်းနှင့်ပြည့်နေသော်လည်း တပည့်တော်များက ထိုလူကို ယေရှုထံသို့ ခေါ်ဆောင် လာခဲ့ကြပါသည်။
“ရွေးကောက်သည်” ဟူသည်မှာ ရွေးချယ်သည် သို့မဟုတ် ရွေးယူ သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မှီ ဘုရားသခင်သည် မည် သူ့ကိုကယ်တင်မည်အကြောင်း လူသားများထဲက ရွေးကောက် ထားပါသည်။
ဤမျက်စိကန်းသောသူသည် ရွေးကောက်ခံရသောသူဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ တပည့်တော်များ ကို အလူထံသို့ပို့ဆောင်ပြီး သူတို့က ယေရှုထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးကြပါသည်။
ယခုတွင် တစ်မြို့လုံးက ယေရှုကို ငြင်းပယ်ခြင်းအတွက် အပြစ်တင်ကြသည်။ စီရင် ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားကျောင်းသို့လာရန် လူတို့ကို သွားဖိတ်ကြသည်။ အများစု မလာမယ်မှန်း သိကြပါသည်။ အများစုက သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသည်ဟုပင် ထင် ကြပါသည်။ လော့ခ်အိန်ဂျယ်တွင်ရှိသောလူအများစုက မာရ်နတ်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် သာရှိနေကြပါသည်။ သူတို့က ဘုရားကျောင်းလာပြီး ယေရှုအကြောင်း ကြားရဖို့ကို ရင်လေး နေကြသည်။ သို့သော် အများစုသည် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ကြသောကြောင့် ကယ် တင်ခြင်းမရသေးကြောင်း၊ လုံးဝကယ်တင်ခြင်းမရ ကြကြောင်းသိထားသည်ဖြစ်၍ ဘုရား ကျောင်းသို့လာကြရန် လူတို့ကို ဖိတ်ကြားထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ရှက်ဘွယ်ကောင်းသော ကိလေသာလက်သို့အပ်လိုက်တော်မူ၏။…( သူတို့သည် ) ဘုရားသခင်ကိုမုန်းသောသူ၊ ဝါကြွားသောသူ၊ ထောင်လွှားသောသူများ၊ မိဘစကားကို နားမ ထောင်သောသူ….ကျေးဇူးမရှိသောသူ…..ဘုရားသခင်ကိုနှစ်သက်သည်ထက် ကာမဂုဏ်ခံစား ခြင်းကို သာ၍နှစ်သက်သောသူဖြစ်သည်” ( ရောမ ၁း ၂၆- ၃၀၊ ၂ တိမောသေ ၃း ၃၊ ၄ ) ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ကျွန်တော်တို့၏မြို့သည် မှားယွင်းမှုများ၊ မာရီဂျူနာ၊ ဆေးလိပ်စွဲသူများ၊ ကာမဂုဏ် နှစ်သက်သူများ၊ စံသွေသူများ၊ ယေရှုခရစ်ကို မုန်းတီးသူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်ကို သိပါ သည်။ သင်တို့သိသည်ထက် သာ၍များစွာ ကျွန်တော်သိသည်။ ဘုရားမဲ့သည့် ဤမြို့တွင် တရားဒေသနာဟောသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ဤနေရာ၌ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသည့် လူငယ် မိန်းမ သို့မဟုတ် ယောက်ျားတစ်ယောက်ယောက် ရှိသည်ကိုသိထားပါသည်။ ပြစ်တင်ရှုပ်ချခြင်းကိုခံရသူများထဲ က ဘုရားသခင်၏ တပါးတည်းသောသားတော် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရန် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသောသူရှိ မည်ကို သိသည်။ ထိုအထဲတွင် သင် ဖြစ် မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဘုရားကျောင်းသို့ပြန်လာသော လူငယ် ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမတို့ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလင်းပေးခြင်းကို ခံသောသူများဖြစ်ကြပြီး မာရ်နတ် လက်ထဲက ရွေးကောက်ခံရသူများလည်းဖြစ်ကြပါသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သွန်းလောင်း သော ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံသောသူလည်းဖြစ်ပါသည်။
လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံသောသူ၏အသွေးတော်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရ
အပြစ်ထဲက ရွေးနှုတ်သဖြင့် အသစ်သောအလုပ်ကို စတင်လုပ်ဆောင်၊
ခမည်းတော်ကို ချီးမွမ်းကိုးကွယ်၊ သားတော်ကိုလည်း ချီးမွမ်းပါ၊
ကယ်တင်ခြင်းခံရ၊ ကယ်တင်ခြင်းခံရ၊ အပြစ်အလုံးစုံခွင့်လွှတ်ပြီး အပြစ်ကြွေးကြေပြီ
ကယ်တင်ခြင်းခံရ၊ ကယ်တင်ခြင်းခံရ၊ ကားတိုင်မှာအသေခံသူ၏ကယ်တင်ခံရပြီ
( “အသွေးတော်ဖြင့် ကယ်တင်ခံရ” S. J. Henderson, ၁၉၀၂ )
အာမင်၊ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းပါ၏။ ဟာလေလုယာ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံသူ၏ အသွေးတော်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ။
ဤသူသည် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသောသူဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များသည် လာ၍ ထိုအပြစ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ကြသည်။ ထိုနည်းတူ ကျွန်တော်တို့သည် မြို့ထဲသို့လာပြီး သင်တို့ကို ခေါ်ထုတ်သည်။ ထို့အပြင် သူတို့သည် ထို လူကန်းကို ယေရှု ထံသို့ ခေါ်ဆောင် လာ ခဲ့ကြပါသည်။ အာမင်။ မြို့သည် ကျိန်ခြင်းကို ခံရသည်။ သို့ရာတွင် ရွေးကောက်ခံရသော လူငယ်သည် ကျိန်ခြင်းခံရသည်မဟုတ်။ သူတို့သည် သူ့အား ယေရှုထံသို့ ခေါ်လာခဲ့ကြသည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ လူငယ်လေးသည် မျက်စိကန်းသည်။
သူသည် ဘာမျှ လုပ်မရကိုင်မရ မျက်ကန်းဖြစ်သည်။ သူသည် လင်းနို့တစ်ကောင်အ လား မျက်စိကန်းသည်။ ခေါင်းဖြတ်ခံရသည်အတ်ိုင်း မျက်စိကန်းသည်။ သင်သည်လည်း ထို မျက်ကန်းအလားဖြစ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါသည်။ လူငယ်လေးသည် မျက်စိကန်းသူ တစ်ဦးဖြစ် ပါသည်။ မျက်စိကန်းသောသူဖြစ်သည်။
ယခုတွင် တစ်ခုခုကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် မျက်ကန်းဟုဆိုလိုသည်မှာ မှန် ကန်ပါသည်။ သို့သော် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ထိုထက်သာ၍ အဓိပါယ်ရှိပါသည်။ မဿဲဟင်နရီက တင်ပြထားသည်အတိုင်း “ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုက “မျက်စိကန်းသော သူတို့ကိုမြင်စေမည်” ဟုတရားဒေသနာဟောပြောခြင်းဖြစ်သော ဟေရှာယ ၆၁း ၁ ကို ပြည့်စုံ စေသည်ဟု ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းက ဆိုပါသည်။ ( လုကာ ၄း ၁၈ )
ယေရှုသည် မျက်ကန်းကို လက်နှင့်ကိုင်၍ “မြို့မြင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။” ( မာ ကု ၈း ၂၃ ) ယေရှုက မျက်စိကန်းခြင်းကို ငြိမ်းစေရန်အလိုရှိလျှင် မျက်ကန်းက အခြားအပြစ် သားများနှင့်မတွဲဖက်ဘဲ သီးခြားဖြစ်စေရန်လိုအပ်သည်ကို ဤအရာက ပြသပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်တွဲဘက်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ထမ် ဘိုးကို မထမ်းကြနှင့်……။ သင်တို့သည် ထိုသူတို့အထဲမှာထွက်၍ အသီးအခြားနေကြလော့။ မစင်ကြယ်သောအရာကို လက်နှင့်မျှ မ တို့နှင့်။ ထိုသို့ပြုလျှင် သင်တို့ကို ငါသည် လက်ခံမည်။ သင်တို့၏ အဘဖြစ်မည်။ သင်တို့သည်လည်း ငါ၏သားသမီးဖြစ်ကြလိမ့်မည် ဟု အနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံသော ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။” ( ၂ ကော ၆း ၁၄၊ ၁၇-၁၈ )
လူငယ်များသည် အမြဲတမ်း ကယ်တင်ခြင်းရလိုကြသည်။ ဘုရားကို သိလိုကြသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် အပြစ်ရှိသောမိတ်ဆွေများ၏ ဟန့်တားခြင်းကိုခံတတ်ကြသည်။ ယေရှု ကို ငြင်းပယ်သော မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။ ယေရှုက မျက်စိကန်းသောသူအား မျက်စိမမြင် ခင်၌ “မြို့ပြင်သို့ခေါ်ထုတ်နိုင်သည်အတွက်” ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဆိုးသွင်း သည့် အပေါင်းအသင်းထဲကနေ ထွက်လာရပါမည်။ ထွက်ရမည်။ ထွက်ရမည်။ ထွက်ရမည်။ သူသည် သူအား ဆက်လက်ကန်းနေရန် အလိုရှိသော ဆိုးသွင်းမိတ်ဆွေများထဲက နေ ထွက် လာရပါမည်။ ယေရှုသည် သူ့ကို လက်ဆွဲ၍ “မြို့ပြင်သို့ ခေါ်ထုတ်သွားပါသည်။” ဤမျက်စိ ကန်းသောလူသည် ဗက်ဇဲဒမြို့ရှိ ဆိုးသွင်းသော မိတ်ဆွေများနှင့်မကွာဘဲရှိနေမည်ဆိုလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရမည်ဟု မထင်ပါ။
၃။	တတိယအချက်၊ သူ၏အလင်းပေးခြင်းသည် တဆင့်ချင်းဖြစ်လာသည်။
“သူ၏မျက်စိကို တံထွေးနှင့်ထွေး၍ ( “သူ့မျက်စိပေါ်တွင် ထံထွေးကိုတင်၍ ) သူ့အပေါ် မှာ လက်တော်ကို တင်၍၊ သင်သည် တစုံတခုကိုမြင်သလောဟုမေးတော်မူ၏။ ထိုသူသည် ကြည့်မျှော်လျှင်၊ လူတို့သည် သစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ လှမ်းသွားသည်ကို အကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်ဟု လျှောက်၏။ နောက်တဖန် သူ၏မျက်စိပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်၍ မျှော်ကြည့်စေတော်မူလျှင် သူသည် ပကတိအဖြစ်သို့ရောက်၍ အလုံးစုံတို့ကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်လေ၏။” ( မာကု ၈း ၂၃-၂၅ ) သုတ္တံကျမ်းက ထိုအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်ကောင်းကိုပေးထားပါသည်။
“ဖြောင့်မတ်သောသူ၏လမ်းသည် တက်သောအာရုဏ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ နေထွက်သည်တိုင်အောင် တိုးပွါးထွန်းလင်းတတ်၏။” ( သုတ္တံ ၄း ၁၈ )
သင်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ မျက်ကန်းဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည် ဘုရားကျောင်းသို့ လာကြသည်။ သို့ရာတွင် သင်တို့ကြားသမျှသောအရာအလုံးစုံကို မရှင်းလင်းကြပါ။ ထို့နောက် ခရစ်တော်သည် သင်တို့ကို အကူအညီပေးမည်ကို သင်သည် စတင်သတိပြုမိလာသည်။ သူသည် သင်တို့ကို ကူညီနိုင်သည်ကို သင်တို့က စတင်မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သင် တို့သည် သူ့ကို မမြင်နိုင်ပါ။ မခံစားနိုင်ပါ။ “ယုံကြည်ခြင်းသည် မမြင်သေးသောအရာကို မျက် မှောက်ပြုခြင်း၊ သိမှတ်စွဲလမ်းခြင်းဖြစ်သည်” ( ဟေဗြဲ ၁၁း ၁ )) ကို သတိပြုမိမည်။
တမန်သောမက “ငါမယုံကြည်” ဟုဆိုသည်။ ထို့နောက် ယေရှုသည် ကြွလာ၍ သောမက သူ့အား “ကျွန်ုပ်၏သခင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်” ဟုဆိုသည်။ ယေရှုက သောမ အား “ငါ့ကိုမမြင်ဘဲ ယုံကြည်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်က ယေရှုသည် “မမြင်ဘဲ ယုံကြည်သူ” လူသန်းပေါင်းများစွာ ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။
John Cagan ၏စကားကို နားထောင်ကြပါ။ သူက “ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရှာမတွေ့ပါ။ ငါ သည် သေလုနီးပါးဖြစ်သည်…။ ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ရမည်မှာ ( ယေရှု ) ကို ယုံကြည်ကိုးစား ဖို့သာဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကာယခံစားချက်မရှိပါ။ ခံစားချက်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကို ရရှိသည်။ ကျွန်တော်သည် ယေရှုတစ်ပါးတည်းကိုသာ ကြည့်မျှော်သည်။ ယေရှုသည် ကျွန် တော်အပြစ်အလုံးစုံကို ဆေးကြောတော်မူကြောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းအားဖြင့်သာ သိသည်။ ခိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်ချက်တွင် အဘယ်သို့သိသည်ကို မိမိကိုယ်ကို အံ့ဩမိသည်။ သို့ရာတွင် …. ယေရှုခရစ်၌ရှိသောယုံကြည်ခြင်းကို သေချာတွေးတော်ပြီး နောက် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်တော်၏အဖြေဖြစ်ပါသည်” ဟုဆို ပါသည်။
Philip Chan ၏စကားကို နားထောင်ကြပါစို့။ “ကျွန်တော်လုံး၀ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ် ဘူးဟူသောအတွေးမျိုးကို မှတ်မိသေးသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းကလဲ မှန်ကော မှန်ရဲ့လားဟု စ တင်သံသယပင်ဝင်ခဲ့မိသည်။ ( ထို့နောက်) ဒေါက်တာ Hymers က ယေရှုကို မရသောသူများ အပေါ် စာတန်က မည်သို့မျက်စိကန်းစေသည်အကြောင်းကို ဟောပြောခဲ့သည်။ စာတန်အ လုပ်လုပ်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ပျောက်သောသူ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးတော့ စိတ်ချမှုနှင့်ဆိုင်သည့်အတွေးမျိုးကို တွေးစေခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ဒေါက်တာ Hymers က ငါသည် ယေရှုကို အမှန်တကယ် ကိုးစားရမည်။ သူ့ကို သာလျှင် ယုံကြည်မည်ဟုဆိုသည်။ အဘယ်သူကိုမျှ မကိုးစားပါ။ ဘာမျှ ကိုးစားမရပါ။ ( ကျွန် တော့်စိတ်နှလုံး ) သံသယဖြင့် ဝေ၀ါးနေသည့်အချိန်၌ ယေရှုသည် ထိုအရပ်တွင် ရှိနေပါသည်။ ယေရှုကယ်တင်ရှင်သည် ကျွန်တော့်ကို ချီမဖို့ အနားတွင် ရှိလျက်နေပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်သောယေရှုကို မကြည့်ဘဲ အပြစ်ကို အဘယ်မျှလောက် သည်းခံနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီး ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ သည်။ သူတို့သည် ခံစားချက်ကို တွေ့ကြုံရန် မစောင့်ဆိုင်းကြပါ။ စာတန်၏မုသာကို နား ထောင်ရန် မစောင့်ဆိုင်းကြပါ။ အပြစ်အလုံးစုံကို ဆေးကြောခြင်းပြုရန် ယေရှုထံသို့သွားရမည်။ ကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်းဖို့မစောင့်ပါ။ သေချာခြင်းကိုရှာတွေ့နိုင်သည့်အတွေးအခေါ်များသည် ပျောက်သွားလိမ့်မည်။ ယေရှု ( ကိုယ်တိုင် ) သည် ကျွန်တော်တို့၏စိတ်ချမှုနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် လေးသောအပြစ်ဝင်ကို ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ သူသည် မိမိအသွေး တော်အားဖြင့် ကျွန်တော့်အပြစ်ကို ဆေးကြောသည်။ “ယေရှု၊ စိတ်နှလုံးဖြင့်ချစ်ရသူ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ယခု ငါသတိရသည်။ ယေရှု၌ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရရှိသည်ကိုလည်း သတိရသည်။ အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပြုပေးသော သားတော်ယေရှု ခရစ်ကိုပေးသော ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းပါသည်။”
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက ယေရှုကိုငြင်းပယ်သောမိန်းမလေးတစ်ဦး၏စကားကို နားထောင်ပါ။ သူမက “ကျွန်မသည် အပြစ်ကိုသိမြင်သဖြင့် မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသည်” ဟု ဆို သည်။ နေ့တိုင်းလိုလို ဆုတောင်းပဌနာပြုပါသည်။ တရားဒေသနာစာမူကို နေ့တိုင်းလိုလို ဖတ် နေမိသည်။ ထိုတရားဒေသနာများက ကျွန်တော်ကို မကူညီနိုင်ကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခံစားချက်များစွာနှင့်ယုံကြည်ခြင်းများစွာကို စောင့်ဆိုင်းနေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန် တော်၌ ရှုပ်ထွေးသောစိတ်အစဉ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ယေရှုထံသို့ မလာနိုင်ကြောင်းကို ဒေါက်တာ ဒေါက်တာ Cagan ကို ပြောပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီး မကြာခင်မှာပဲ မစ္စတာ Griffith က “သင်ကောင်းသည်အထိ စောင့်ဆိုင်းနေလျှင် လုံးဝလာနိုင်မည်မဟုတ်” ဟူသော သီချင်း ကို သီဆိုသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံစားချက်နှင့် ( စိတ်လှုပ်ရှားမှု ) တို့သည် လုံး၀ ယုံကြည်မရသည် ကို ( သိထားပါသည်။ ) ထို့ကြောင့် ထိုအရာများကို လုံးဝမယုံကြည်ပါ။ ယေရှုကို ယုံကြည်သော အခါ သူသည် ကျွန်တော့်အပြစ်ကိုလွှတ်၍ အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောမူမည်။ ယေရှု သည် ကျွန်တော့်အား စာတန်လက်ထဲက ကယ်နှုတ်ပြီး လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် ကို ဖျက်ဆီးမည့်သူ၊ အဆုံးတွင် ငရဲသို့ပို့ဆောင်ပေးမည့်စာတန်၏အစေကို ဆက်လက်ခံခြင်း ထက်စာလျှင် ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီး စောင့်ရှောက်သည့်ယေရှု၏အစေခံ ပိုဖြစ်ချင်မိသည်။ သင် တို့၏သီချင်းစာရွက်ထဲတွင် နံပတ် ၂ ကို သီဆိုကြပါစို့။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီဆိုကြပါစို့။
ယေရှု၊ စိတ်နှလုံး၌ ချစ်ရသောသူ၊
ကယ်တင်ပါ၊ ကယ်တင်သောအရှင်၊ ကယ်တင်မူပါ။
နောက်ဆုံး၌ ကျွန်ု္ပ်ဝိညာဉ်ကို လက်ခံမူပါ။
( “ယေရှု၊ စိတ်နှလုံး၌ ချစ်ရသူ” Charles Wesley, ၁၇၀၇-၁၇၈၈ )
သင့်အပြစ်ကို ယေရှုအားဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်သည်ကို အလိုရှိသည်ကို သိပါသည်။ ယေရှုက သင့်ကို ကယ်တင်စေလိုကြောင်းကိုလည်းသိပါသည်။ ပြည့်စုံသောသူဖြစ်ဖို့ မမျှော် လင့်ပါနှင့်။ ယေရှုက သင့်အပြစ်အလုံးစုံထဲက သင့်ကို ကယ်တင်ဖို့သာ မျှော်လင့်ပါ။ စုံလင် ခြင်းသည် နောက်၌ လာလိမ့်မည်။ ယခုတွင် ယေရှုစကားကို နားထောင်ပါ။ နှုတ်ကပတ်တော် သည် ယေရှု၏နှုတ်ထဲက လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့လာကြလော့။” သင်သည် တခါတရံ အပြစ်နှင့် ပြည့်နှက်သောသူနှင့်ပျောက်ဆုံးသောသူအဖြစ် ညအိပ်ယာဝင်ချိန်၌ ခံစားတတ်ပါသည်။ တည လုံးသင့်ပြစ်မှားသောအမှားများကို စိုးရိမ်ပူပန်လျက် အိပ်ယာဝင်သည်။ နောက်ညတွေမှာလဲ စိုးရိမ်ပူပန်လျက် ညအိပ်ယာဝင်ပါသည်။ ယေရှုက ဤသို့မိန့်တော်မူသည်။
“ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့လာကြလော့။ ငါ သည် ချမ်းသာပေးမည်။”
သင်သည် သေချာမှုကို မလိုအပ်ပါ။ ချမ်းသာ သာလျှင်လိုအပ်သည်။ သင့်စိတ်ဝိညာဉ် ချမ်းသာမှုသာလိုအပ်သည်။ သင်တို့ကိုင်သော သီချင်းစာရွက်ထဲက နံပါတ် ၃ ကို အားလုံးသီ ဆိုကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်လာပြီ၊ သခင် ယခု ကျွန်ုပ်လာပြီ၊
အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြော သန့်စင်စေပါ၊
ကာရနီတွင် စီးသော ထိုအသွေးတော်။
( “ကိုယ်တော်၊ ကျွန်ုပ်လာသည်၊”, Lewis Hartsough, ၁၈၁၈-၁၉၁၉ )
သင်သည် ယေရှုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့နှင့် စကားပြောလိုလျှင် ပထမအတန်းနှစ်တန်းသို့လာ၍ ထိုင်ပါ။ အာမင်။
“ကိုယ်တော်၊ ကျွန်ုပ်လာသည်” )Lewis Hartsough, ,၁၈၂၈-၁၉၁၉ ရေးစပ်သည်။ )
သစ်ပင်များလမ်းလျှောက်သကဲ့သို့ လူတို့ကို မြင်ခဲ့သည် အကျဉ်းချုပ်!
“ဗက်ဇဲဒမြို့သို့ရောက်တော်မူလျှင်၊ လူကန်းတယောက်ကို အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့၍၊ ထိုသူကို တို့တော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်ကြ၏။ ကိုယ် တော်သည် လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍ မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှ၊ သူ၏ မျက်စိကို တံ ထွေးနှင့်ထွေး၍ သူ့အပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်လျက်၊ သင်သည် တစုံတ ခုကိုမြင်သဘောဟု မေးတော်မူ၏။ ထိုသူသည် ကြည့်မျှော်လျှင်၊ လူတို့သည် သစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ လှမ်းသွားသည်ကို အကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်ဟု လျှောက်၏။ နောက်တဖန် သူ၏မျက်စိပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်၍ မျှော်ကြည့်စေတော် မူလျှင်၊ သူသည် ပကတိအဖြစ်သို့ရောက်၍ အလုံးစုံ တို့ကို ရှင်းလင်းစွာ မြင် လေ၏။” ( မာကု ၁၁း ၂၂- ၂၅ )
၁။ ပထမအချက်၊ ထိုမြို့သည် ကျိန်ခြင်းခံရသောလည်း ရွေးချယ်ခံမျက်ကန်း လူ ငယ်လေးမဟုတ်ပါ။ ရောမ ၁၁း ၇၊ ရောမ ၁း ၂၆-၃၀၊ ၂ တိမောသေ ၃း ၃၊ ၄။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ လူငယ်လေးသည် မျက်စိကန်းသည်။ လုကာ ၄း ၁၈၊ မာကု ၈း ၂၃၊ ၂ ကော ၆း ၁၄၊ ၁၇-၁၈။
၃။	တတိယအချက်၊ သူ၏အလင်းပေးခြင်းသည် တဆင့်ချင်းဖြစ်လာသည်။ မာကု ၈း ၂၃- ၂၅၊ သုတ္တံ ၄း ၁၈၊ ဟေဗြဲ ၁၁း ၁၊ မဿဲ ၁၁း ၂၈။